संघीयताको शत्रु सानो सोच « News of Nepal
संघीयताको शत्रु सानो सोच
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र संघीयता सबै आयो तर पुरानो खराब संस्कार भने रहिरह्यो। कारण अझै राजनीतिक कलह, एक–अर्कालाई गाली, आफ्नो मान्छेको लागि कुर्सी आदि घिन लाग्दा कुराहरु यसका सबुत हुन्। शायद यही कारणले होला मानिसहरु नचाहेर पनि यिनीहरुप्रति नकारात्मक सोच सृजना राख्न बाध्य छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने, एकपल्ट पाउने जीवनमा मानिसले एउटा राम्रो चमत्कार गरी राम्रो छाप–चिन्ह मुलुक र समाजका लागि छोड्नुपर्ने हो। तर यस्ता व्यक्तिहरुको जन्म नै भएन यो मुलुकमा, जुन दुःख लाग्दो कुरा मान्न सकिन्छ। मुलुक हाँक्नेहरुबाहेक हाम्रो देशमा अल्लारे समाज र बुद्धिजीवीहरु पनि उस्तै छन्। कारण प्रायः यिनीहरुलाई राम्रो संस्कार सिक्ने, पत्रपत्रिका पढ्ने, एक–अर्कालाई मद्दत गर्नुपर्दछ भन्ने भावना पनि छैन, मतलब पनि छैन। यसले गर्दा पनि हाम्रो मुलुक अरु मुलुकको तुलनामा अलि पछि परेको हुनुपर्दछ।
समग्रमा प्रायः यहाँका व्यक्तिहरुका कुरा गर्दा देखावा गर्ने, कमिसन खाने, कसरी विदेश जाने, स्वार्थ सिद्ध कसरी पूरा गर्ने र आलोचना कसरी गर्ने आदि हुने गरेको छ। ए बाबा, यी कुरबाहेक हामीले आफ्नो फुर्सदमा केही न केही मुलुकको लागि योगदान किन नगर्ने ? चाहे त्यो ठूलो कुरा होस्, चाहे सानो कुरा होस्। तर मानिसहरु यस्ता कुराहरुमा अनभिज्ञबाहेक चाहेर पनि इच्छा तथा चाहना राख्दैनन्। हाम्रो जस्तो मुलुकमा राम्रा मान्छे र धेरै बुद्धि–ज्ञान भएका मानिसको पनि कमी छैन। तर ताजुबको कुरा के छ भने, यस्ता व्यक्तिहरु पनि कुर्सीमा जाँदा अर्थात् ठूला ओहदामा जाँदा पनि मुलुक र समाजको लागि केही गर्न सकिराखेका हुँदैनन्, सिवायझुटा आश्वासन र गफबाहेक। आखिर देशको दु्रत विकासका लागि यिनीहरुको हातखुट्टा कसले बाँधिराखेका हुन्छन् त ? यो कुरा बुझ्न धेरै गाह्रो भएको छ।
हाम्रो मुलुकमा द्रुत देश विकास नहुनुका कारणहरु एकपल्ट फेरि भन्नुपर्दा, मुलुक हाँक्नेहरुलाई नै औंल्याउन सकिन्छ। कारण जनताबाट विश्वास पाएका नेताहरु कडा हुन नसक्नु र नियम कानुनलाई दह्रो गराउन नसक्नु नै हो। यिनीहरु सर्वसाधारणलाई कडी कडाउ गरेजस्तो त देखाउँछन् तर पनि भ्रष्टाचारी तथा गलत मानिसहरु उम्किराखेको हुँदा पनि यिनीहरु केही गर्न सक्दैनन्, जुन शंका गर्ने विषय हो। यो मुलुकमा विकासका कुरा गर्दा, प्रायः लगानीकर्ता तथा केही गर्न चाहने व्यक्तिहरुलाई पनि अक्सर हौसला दिनुको बदला दुरुत्साहित याने कि हरेस गरिराखेको हुन्छ। जस्तै– आयस्रोत, कर, कागजपत्र, कमिसन आदि यसका प्रमाण मान्न सकिन्छ, अन्यथा उद्योग विकास तथा रोजगारका कुरा गर्दा हाम्रो मुलुक पछि नपर्नुपर्ने होइन र ? यत्रो सानो मुलुकमा लोकतान्त्रिक मुलुक भएर पनि जनमतसंग्रह नगरी दुई–चारजना नेताको आडमा नक्कल र नखरा गरेर संघीयता ल्याइहालियो। यदि यो प्रणाली भोलि सफल नभएको खण्डमा नेपालीले हार तथा ठूलो नोक्सानी खेप्नुपर्ने हुन्छ। जे होस्, आशा गरौं जुन प्रणालीलाई अपनाए पनि नेपालको भविष्या राम्रो होस्। तर यो संघीयता प्रणालीलाई सफल गर्ने हो भने समाज तथा देश चलाउनेहरु केही परिवर्तन हुनै पर्दछ। भनाइको मतलब लालच, आफ्नो मान्छे, स्वार्थ आदि विकृतिलाई सर्वप्रथम मुलुक हाँक्नेहरुले तिरस्कार गर्नुपर्दछ। जुनसुकै सरकार आए पनि कुर्सीमा बस्नेहरुले सोच र मन ठूलो तथा फराकिलो गर्दै जानुपर्दछ।
यो देशमा उद्योग विकास फस्टाउन नसक्नु, बैंकमा तरलताको सुधार हुन नसक्नु, शेयर कारोबारमा गिरावट आउनुजस्ता कुराहरु सरकारको दूरदर्शिता नहुनु, दह्रो अर्थविद् प्रधानमन्त्री नहुनु, करको मारले सताउनु, लगानीकर्ताहरुलाई बढी हौसला दिनुको बदला धेरै सोधपुछ, धेरै कागजपत्र, आयस्रोत खोज्नु आदि कुराहरु नै देश विकासका बाधक हुन्। त्यसैले यी सब कुराले गर्दा मुलुक हाँक्नेहरु परिवर्तन हुनै पर्छ।
– रमेश केशरी वैद्य, काठमाडौं
मिर्गौला फेल हुने सात कारण
रोगबाट बच्ने एउटा महत्वपूर्ण तरिका स्वस्थ जीवनशैली हो। शरीरको स्वास्थ्य बिग्रनुमा हामीले भाग्यलाई दोष दिन्छौं। तर कहिलेकाहीँ हामी अस्वस्थ जीवनशैली यापन गर्छौं। जसले हाम्रो आन्तरिक अंगहरुमा समेत नराम्रो असर गर्छ। शरीरको महत्वपूर्ण अगंहरुमध्ये किड्नी प्रमुख अंग हो, तथापि शरीरलाई स्वस्थ राख्न सबै अंगको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
कोखामा हुने यस अंगले रगतमा इलेक्ट्रोलाइट नियन्त्रण गर्न मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। किड्नीले शरीरबाट अनावश्यक चीजलाई फालिदिन्छ (विषादीलगायतका हानिकारका चीज)। किड्नीको सामान्य काममा असर हुनु किड्नी फेल हो। किड्नी फेलका धेरै कारण हुन्छन्। कहिलेकाहीँ किड्नीमा चोट लागेर पनि किड्नी फेल हुन्छ। त्यस्तै न्यून रक्तचाप, शल्यक्रियाको साइड इफेक्ट लगायतका कारणले किड्नीमा गम्भीर हानि गर्छ। किड्नी फेलका सामान्य कारण यस्ता छन्।
पर्याप्त पानी नपिउनुः हामीमध्ये धेरैले पर्याप्त पानी पिउन बिर्सन्छौं। एउटा वयष्कले कम्तीमा पनि दिनमा पाँच लिटर पानी पिउनुपर्छ। बालबालिका र युवायुवतीदेखि वृद्धवृद्धाले पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ। पानी कम हुँदा शरीरमा डिहाइड्रेसन हुन्छ। डिहाइड्रेसनले किड्नी स्टोन र किड्नीलाई ड्यामेज गराउँछ।
पिसाब रोक्नुः काममा व्यस्त हुँदा वा भनेको बेला शौचालय नपाउँदा वा गाडीमा यात्रा गर्दा धेरै मानिसले पिसाब रोक्ने गर्छन्। तर यसले किड्नीलाई नराम्रो हानि गर्छ। पिसाब जम्मा हुँदा किड्नीमा ब्याक्टेरिया जम्मा हुन्छ, जसका कारण किड्नीमा संक्रमण हुन्छ र बिस्तारै किड्नी बिग्रन्छ।
अत्यधिक प्रोटिनः शरीरमा अत्यधिक मात्रामा प्रोटिन भयो भने पनि किड्नी फेल हुन्छ। नूनको मात्रा बढीः नियमितरुपमा नुनिला खानेकुरा खाँदा रगतमा इलेक्ट्रोलाइटको सन्तुलनलाई नियन्त्रण गर्न किड्नीले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पेनकिलरको नियमित प्रयोगः नियमितरुपमा पेनकिलर खाँदा किड्नीमा रगतको प्रवाहलाई सीमित गरिदिन्छ र किड्नीमा दीर्घकालीन असर गर्छ।
अत्यधिक मदिराः अत्यधिक मात्रामा मदिरा पिउँदा रक्तप्रवाहमा उच्च मात्रामा युरिक एसिड उत्पन्न हुन्छ, जसका कारण किड्नीलाई असर गर्छ र किड्नी फेल हुन्छ।
संक्रमणप्रति अज्ञानताः निश्चित संक्रमण जस्तै– भाइरल फ्लु, टन्सिल, पेटसँगसम्बन्धित संक्रमणले कहिलेकाहीँ किड्नीलाई असर गर्छ।
– शंकर पाण्डे, शिवम पोलिक्लिनिक